Njalo wesifazane ufuna ukubheka zikanokusho esicindezelayo sokuba konke lokhu ukuqaphelisisa imibukiso emisha futhi uthathe kubo ulwazi oludingekayo ukuze ngokwabo. Cabanga ngalokho imfashini le ekwindla, ulwazi olunjalo luyoba wusizo kithi sonke ngempumelelo uzisebenzise umkhuba ekuphileni kwansuku zonke.
A ezihlukahlukene izitayela lolu hlobo izingubo kwanelisa ozinikezele kakhulu ngenkani. imodeli Wide nge imikhono voluminous "bat", zakudala, sezempi Okuningi, noma ezifanayo besilisa side - bona bonke basonta yini imfashini lokhu kuwa. Indaba eziyisisekelo lokuthunga amajazi eziyisithupha, cashmere kanye Tweed, nakuba zikhona izinto ezintsha kanye inhlanganisela lesikhumba, noboya noboya. Abaholi phakathi mikhondo kukhona amazombe futhi iseli, nakuba Motifs wamukelekile futhi ezimibalabala, amaphetheni weJiyomethri futhi ezingalindelekile. Ububanzi umbala amathoni zahlukahlukene kakhulu, omnyama nomhlophe kanye grey buhlanjululwe ngemibala egqamile, ophuzi, obomvu, shades blue, lavender ethandwa, umnqumo, okhakhi.
Mhlawumbe, abaningi uyojabula kuyinto evamile ukugqoka lokhu kuwa onobuhle okuxekethile okuqinile ukuthi ibukeke ehlombe yomunye. Nokho, kukhethwa ijezi kuyadingeka kumelwe uqaphe kakhulu, ngoba uyakwazi ngokungeza sibalo ngobukhulu eziningana. umbono intombazane enjalo efanelekayo usengozini futhi encane, umnikazi amafomu omangalisayo kwadingeka esikhokhela kangcono ukunakekela zakudala, ongakhetha pritalonnye. Okwangempela collar omkhulu, preference umbala kunikezwa ushokoledi, beige, isihlabathi, ugodo pink shades, kanye omnyama nomhlophe.
Zonke izinhlobo izicathulo kanye amateki ngesikhathi yedwa ongaphakeme ngokuqinile banezikhundla ehola, kodwa akukhona konke imfashini lokhu kuwa. Iqakala zonke njengoba ethandwa, zingabuye futhi njengabesifazane kanye ezimaholoholo, inhlanganisela wamukelekile ukwakheka ezahlukene, isibonelo, ne izindwangu, noma isikhumba lace Tweed, a negogo. Nalapha futhi, banake imodeli patent. Boots kukhona izicathulo ezifanele kanye izithende futhi flat, konke kuncike kulokho isitayela ezifaneleke wezigqoko kanye ukhululekile kakhulu kuwe. isitayela Hunter sika - at esiqongweni ukuthandwa.
Cishe bonke ekhombisa linqobe okuthiwa Okuningi, amapensela kanye imodeli obuphelele ngezansi nje kwamadolo. Ukuze ukhethe ukuthi yini imfashini ekwindla ka-2013, ulula, udinga ukuba acabangele izidingo ezidingekayo ukuze sibalo, izici zayo kanye namakhono ukugcizelela engilakhele isithunzi sobukhulu izingubo. Skirt - lena ikhadi trump ngawo ungashintsha ngale ukuqashelwa, nika umfanekiso sexiness, isitayela nokukhanya. Nokho, ukuze ube winner, kumelwe kahle ukhethe phezulu. Uma abakholelwa okuthile, akukuhle ukuba izifake engozini futhi ucele iseluleko.
Lesi sihloko uhlu Yiqiniso, akubona bonke imfashini izingubo, ekwindla 2013 kuyinto ocebile futhi ezihlukahlukene limile yayo. Isiqondiso main esiyisibonelo kini, udinga ukugxila kalula futhi nangezindlela ezihlukahlukene isifazane. Nikeza neNkabazwe, Pore esingokwemvelo kulo nyaka, akudingekile, ngoba ngenxa yobuningi ezinemibala egqamile eqoqweni ukuwa njalo kungenzeka ekhanyisa kwemizwa, ukuthola idethi nesikhathi esisha isithombe stylish.
Fashion 80 ukubuya?
Izidakamizwa amakhambi abantu ukwandisa potency ezingabantu. Potency - ke ...
Iziza empilweni nokuvulwa ingane